စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန – Technological University (Hpa-An)
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာနသည် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ B.E.(Mechanical) ရရန် သင်ကြားပေးပါသည်။ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဆိုသည်မှာ အင်ဂျင်နီယာရူပဗေဒ၊ အင်ဂျင်နီယာသင်္ချာ နှင့် ဒြပ်ဝတ္ထုပစ္စည်း အင်ဂျင်နီယာ စသည့် အခြေခံဘာသာရပ်တွေကို အသုံးပြုပြီးတော့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစနစ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍လေ့လာခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းစတဲ့ ပညာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရှည်ကြာဆုံးနှင့် အကျယ်ပြန့်ဆုံး အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်အတွက် အခြေခံဘာသာရပ်များဖြစ်သော mechanics, dynamics, thermodynamics, engineering materials, structural analysis, electronics နှင့် electricity ဘာသာရပ်တွေကို နားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်အနေဖြင့် အခြားသူများနှင့်ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ရန်အတွက် ခေတ်ပေါ် နည်းပညာများဖြစ်သော ကွန်ပျုတာအသုံးပြု၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း၊ ပုံစံထုတ်ခြင်း ၊ ကုန်ထုတ်ပစ္စည်း အရည်အသွေးအား စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စက်ရုံသုံး စက်ပစ္စည်းနှင့်စက်ကြီးများ၊ အပူပေး၊ အအေးပေးစနစ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်၊ လေယာဉ်၊ ရေယာဉ်၊ စက်ရုပ် နှင့် အခြား အချက်အလက် များကိုလည်း ဆည်းပူးထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
စက်မှု အင်ဂျင်နီယာများ ၏ ပညာရေး
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာနသည် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ B.E.(Mechanical) ကိုအပ်နှင်းပါသည်။
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာပညာရေးစနစ်တွင် သီအိုရီနှင့်လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုကို အလေးထားပါသည်။
ပညာသင်နှစ်အဆုံးတွင် သာမန်ပရောဂျက် နှင့် ထူးခြားဆန်းသစ်သော ပရောဂျက်များကို လုပ်ဆောင်ရပါသည်။
ထပ်ပေါင်းအနေဖြင့် ပရောဂျက်ပြီးဆုံးသည့်အချိန်တွင် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် အဖွဲ့လိုက် seminar ပေးရာတွင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းရန်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ဘွဲ့ယူစာတမ်းနှင့် လုပ်ငန်းခွင်လေ့လာခြင်း (အလုပ်သင်) ၂လ ပြုလုပ်ရပါမည်။
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားများအနေဖြင့် ဒေတာတွေ ဘယ်လိုကောက်မလဲ၊ ဘယ်လိုခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာမလဲ ဆိုတာတွေကို အမျိုးမျိုးသောခေါင်းစဉ်များဖြင့်လေ့လာပြီး ပြန်လည်တင်ပြစေပါ တယ်။
ဘွဲ့ရကျောင်းသာများသည် မတူညီသောလုပ်ငန်းခွင် (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်း၊၊ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်မှု၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းများနှင့် သတင်းအချက် အလက်စနစ်များ) အစရှိသည်တို့တွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
အခြားသောခေါင်းစဉ်များမှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်း၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာတိုး တက်မှု၊ ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်း၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နှင့် အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု တို့ပါ ဝင်ပါသည်။
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာနအနေဖြင့် စက်ရုံများတွင် ကျောင်းသားများလက်တွေ့ ကွင်းဆင်းလေ့ လာ ခြင်း၊ စက်ရုံများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ပါ သည်။
၁ ဒေါက်တာရုထ ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး ပါရဂူ ဘွဲ့ ruth.myanmar@gmail.com
၂ ဒေါ်ခိုင်ဇင်ဝင်း တွဲဖက် ပါမောက္ခ ၊
ဒု ဌာနမှူး မဟာ ဘွဲ့ khaing.win1981@gmail.com
၃ ဦးနိုင်လင်းထွန်း ကထိက မဟာ ဘွဲ့ naingtunlin254@gmail.com
၄ ဒေါ်ခင်စန်းဌေး ကထိက မဟာ ဘွဲ့ khinsanhtay1500@gmail.com
၅ ဦးသန့်ဇင်ဝင်း ကထိက အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ thant.pku1980@gmail.com
၆ ဦးစောနေလင်းသူ ကထိက အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ sawnaylinthu@gmail.com
၇ ဦးညီညီစိုး လ/ထ ကထိက အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ mgnyinyisoe@gmail.com
၈ ဒေါ်ခိုင်စံပယ် လ/ထ ကထိက အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ kspsanpal@gmail.com
၉ ဒေါ် သန်းသန်းနု လ/ထ ကထိက အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ aungchitthu1988@gmail.com
၁၀ ဒေါ်် မြင့်မြင့် ဆွေ လ/ထ ကထိက အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ myintmyintswe.tu17@gmail.com
၁၁ ဦးစည်သူအောင် သရုပ်ပြ အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ sithuaung022610@gmail.com
၁၂ ဒေါ်ပန်ဆုမွန် သရုပ်ပြ အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ panpansusu738@gmail.com
၁၃ ဦးတင်ဇာထေွး သရုပ်ပြ အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ seimlar05@gmail.com
Total views : 82334